के तपाईंको शौचालय कागज तपाईं बारेमा भन्छन् - समाचार नियम
के तपाईंको शौचालय कागज तपाईं बारेमा भन्छन्
तिमी माथि वा तल रोल गर्छन्? अर्को समय तपाईं शौचालय रोल मा एक नजर छ घरमा सानो कोठा भ्रमण
शीर्षक यो लेख “के तपाईंको शौचालय कागज तपाईं बारेमा भन्छन्” बेन Ambridge द्वारा लेखिएको थियो, आइतबार 27 डिसेम्बर मा दर्शक लागि 2015 08.30 UTC
ahem - - यो हप्ताको एक बिट गर्न अनुमति रोल प्ले. तपाईं कसरी आफ्नो शौचालय रोल झुन्डियो रुचि? पर्खाल बाट टाढा हुन छाडा अन्त जस्तै तपाईं के (यो भन्दा शैली) वा पर्खाल गर्न अर्को (यस अन्तर्गत शैली)?
अब के डा Gilda Carle हेर्न गरौं ("ताराहरू गर्न सम्बन्ध विशेषज्ञ") आफ्नो रुचि बारेमा भन्न छ.
तिमी माथि रोल भने ... तपाईं शुल्क लिएर मनपर्छ, संगठन लालसा र overachieve संभावना छ.
तपाईं अन्तर्गत रोल भने ... तपाईं राखे-फिर्ता हुनुहुन्छ, बलियो जगहरू संग भरपर्दो र खोजी सम्बन्ध.
यदि तपाईं मतलब छैन, जब सम्म यो त्यहाँ रूपमा ... तपाईं द्वन्द्व कम गर्ने लक्ष्य, मूल्य लचकता र नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई राख्दै जस्तै.
तर आफ्नो रुचि आफ्नो कमाउन शक्ति बारे केही हामीलाई यसो भन्न सके? एक अमेरिकी सर्वेक्षण भेट्टाए 73% अन्तर्गत कमाउन मानिसहरूलाई को $20,000 अन्तर्गत रोल, जबकि 60% जो अधिक कमाउन ती को $50,000 कोल्टे फेर्नु. यी सर्वेक्षण एकदम वैज्ञानिक मनोविज्ञान अध्ययन आवश्यक मापदण्ड पूरा छैन - तर यो स्तम्भ आफ्नो मनपर्ने बाथरूम पढाइ छ भने यो तपाईं चिन्तन गर्न केहि दिन हुनेछ.
यस लेखमा को एक पूर्ण सन्दर्भित संस्करण लागि, जाऊ त्यहाँ benambridge.com. फैंसी केही थप क्विजहरू? आदेश मनोचिकित्सक-क्यू बेन Ambridge द्वारा (प्रोफाइल पुस्तक, £ 8.99) वा देखि £ 6.99 bookshop.theguardian.com
← सत्य त्यहाँ बाहिर भागने छ: किन षड्यंत्र भन्दा छिटो फैलियो 2015: वर्ष औंठाछाप सेन्सर एक gimmick हुनुको रोकियो →